एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि … « Mechipost.com
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि …
प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार २३:३९
फिदिम । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ३ वर्षसम्म अस्तित्वमा रह्यो । यो अवधिमा यो पार्टीले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेकौं निर्णयहरु लिएको छ ।
तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि त्यसका साइड इफेक्ट देखिन थालेको छ । संसद र राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, दुवै दलको आन्तरिक जीवनमा समेत यसका केही असरहरु देखिने भएको छ ।
नेकपाबाट निर्वाचित पद के हुन्छ ?
नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नेकपाको नामबाट निर्वाचित भएकाहरु छन् । एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि उनीहरुको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? यस सम्बन्धमा राजनीतिक दल र कानूनविदका फरक फरक मत छ । यद्यपि पद खारेज नहुनेमा चाहिँ कानुनविदको एकमत छ ।
संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘भोट हाल्ने उनीहरुको अधिकार हुन्छ, जुन बेला चुनाव भयो, त्यो पनि वैधानिक थियो । निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो ।’
उनका अनुसार निर्वाचितहरुलाई मुख्य समस्या पहिचानको हो । अधिकारी भन्छन्, ‘अब निर्वाचन आयोग दुवैसँग बस्नुपर्छ, उनीहरुको कुरा बुझनुपर्छ । उनीहरुलाई चाहिने पहिचान दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल पनि जनप्रतिनिधिले दल बदल गरे मात्र पद जाने बताउँछन् । अहिले नेकपा नै खारेज भएकाले उनीहरु स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिका रुपमा रहने र राजनीतिक रुपमा आफूले चाहेको पार्टीमा आवद्ध भएर गतिविधि गर्न सक्ने उनले बताए ।
सन्ध्या तिवारीको एमाले खोसियो, किरातीको दलको नाम र चिन्ह गायब
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि निर्वाचन आयोगमा गोपाल किरातीले नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले दर्ता गरेका थिए ।
साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिई पूर्वपार्टीकै हैसियतमा कायम गरिदिएपछि पछि दर्ता भएका किराती र तिवारीको पार्टीलाई आयोगले खारेज गरेको छ ।
खाली भएको नेकपा माओवादी केन्द्र नाममा पार्टी दर्ता गर्दा गोपाल किरातीले गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा चुनाव चिह्न राखेका थिए, जुन नेकपा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न थियो । सन्ध्या तिवारीले भने पार्टीको चुनाव चिह्नमा डाँडामाथिको सूर्य राखेकी थिइन् ।
दुवै दललाई महाधिवेशनको चटारो
एमाले र माओवादी दुबैलाई पार्टी पुनर्गठनसँगै महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्ने चटारो पनि हुने भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । विशेष कारणले सम्भव नभएमा थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई एकताको अघिल्लो दिन २ जेठ २०७५ मा पुर्‍याइदिएको छ । एमालेको ९ औं महाधिवेशन २०७१ आसारमा भएको हो । नेकपा बनेको अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने एमालेले एक वर्षभित्र दशौं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुले नेकपा विभाजित हुँदा नै २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएकाले त्यसको आसपासमै गर्ने बताउँछन् । यद्यपि यसबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि अबको दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमालेमा ७० वर्षको उमेर हद
एमाले ब्युतिएसँगै शीर्ष नेताहरुलाई अर्को अप्ठ्यारो आइलागेको छ, ७० वर्षको उमेर उमेर हद । एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष’ तोकिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपाको अन्तरिम विधान यो उमेर हद हटाइएको थियो । अब एमालेसँगै ७० वर्ष उमेर हद ब्युँतिएको छ ।
र यो लागू हुने हो भने केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु प्रभावित हुनेछन् । नेपाल २३ फागुनमा ६९ वर्ष पुगेका छन् भने ओली ११ फागुनदेखि ७० औं वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । (अनलाइनखवरबाट)